Kedu ụdị nke koodu backlink na usoro dị mma maka SEO?
Tupu anyị agaa n'ihu nyochaa koodu ndabere azụ azụ na ọkọlọtọ nke a na-ejikarị maka nzube SEO, ka m malite site na nkọwa ụfọdụ. N'ikwu ya n'ụzọ zuru ezu, a na-amụghachite azụ ọ bụla (ma ọ bụ nke ọzọ, netwọk njikọ inbound) mgbe otu ebe nrụọrụ weebụ nwere URL nke na-eduga na ebe ọzọ nke ọzọ na isi ebe ọzọ na Ịntanetị - site na ịme ka ederede, ma ọ bụ gbakwunye na URL. Na nchịkọta nke njikọ inbound kere maka ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka njikọ profaịlụ ya. N'ụzọ dị otú ahụ, engines ọchụchọ ndị dị ka Google na Bing na-eji ya iji chọpụta ezigbo uru, ewu ewu, na mkpa nke weebụsaịtị ma ọ bụ blog na ọnụ ọgụgụ. N'iburu n'uche na ọ bụghị ha niile ka e kere hà nhata, naanị ịmeghachite backlinks na random n'ihi na ọnụ ọgụgụ kachasị ha agaghị eme. N'ihe banyere njikọ njikọ na-ejikọta maka njikọ SEO, ihe ahụ bụ na ọ bụ naanị njikọ njikọ mma, karịa ọtụtụ ha - parco giochi gonfiabili puglia.
Dịka m kwuworo, ọ bụghị ha nile ka a mụrụ dị. Ọ bụ ya mere, tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị mee ọdịiche dị n'etiti ụzọ abụọ nke njikọ weebụ. N'ezie, ha na-ama ọkwa site na HTML peculiarities na backlink koodu, nakwa dị ka mmetụta dị mma na weebụsaịtị ọ bụla site na echiche nke SEO.
A na - ejikwa backlinks DoFollow ọ bụghị nanị iji jikọọ ibe weebụ abụọ dị iche iche na "ịdọta" ha ọnụ kama iji nyefe na redistribute mma metrics na n'akụkụ abụọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, backlinks na DoFollow na-enwetakarị n'etiti ihe ndị kachasị mkpa, mgbe a bịara n'ịnye ọdịiche ogo ọnọdụ ọchụchọ. A na-eji ụdị njikọ weebụ a nye ntụle ntụle na PA (njikwa peeji nke), DA (ngalaba ikike), PR (PageRank), na ihe ndị ọzọ dịka onye ọrụ tụkwasịrị obi. Ọtụtụ mgbe, a na-etinye njikọ njikọ weebụ dị otú ahụ na àgwà DoFollow na koodu azụlink ha n'ime akwụkwọ akụkọ, yana blog ma ọ bụ isiokwu posts. Mgbe ụfọdụ, a na-achọta ha na nhazi posts na edemede ngalaba.
A na-ahazi redio azụ NoFollow iji jikọọ ibe weebụ abụọ dị iche iche, i. e. , karịsịa maka nzube maka igodo nanị. Ọ pụtara na nsonaazụ koodu NoFollow backlink anaghị eme ka ohere maka ibe ma ọ bụ ikike ngalaba nyefee (a. k. a. njikọ ihe ọṅụṅụ). Buru n'uche na nke a yiri ka ọ na-enweghị ihe dị iche na-eme ka ọ dịkwuo nghọta na nchịkọta na ntinye aha, yana isi nyocha nyocha.
Usoro ndabere azụ azụ na SEO
Kedu ihe na-eme ntọala nke backlinks na SEO? Nke bụ eziokwu bụ na njikọ ọ bụla na-ejikọta ihe ndị na-esonụ: mkpirisi mkpirisi hypertext, akara mkpado arịlịka, njikọ njikọ, na mkpirisi mkpado.
Ọ bụla backlink a mụrụ na
Na-abia na-esote akụkụ ahụ njikọ, nke na-amalite site na backlink anchor tag o na-agwa web engines ọchụchọ. njikọ na-aga ịgbaso, ọ na-enwekwa clickable ma nwee agba pụrụ iche nke na-egosi na ị ga-anọpụ na ọdịnaya ederede na ibe.
Ọ bụla hyperlink na-ejedebe na njedebe mkpado, nke na-agwa ndị engines ọchụchọ banyere mmechi nke akara hyperlink niile.